Etu ị ga - esi ahọrọ glos ịgbado ọkụ TIG
Imirikiti ndị mmadụ anaghị ejikọ okwu welder na onye na-ese ihe, mana n'ihe gbasara ịgbado ọkụ TIG, ọtụtụ ndị welders maara ihe na-agwa gị na nke a bụ ụdị nka. TIG ịgbado ọkụ bụ otu n'ime usoro ịgbado ọkụ siri ike iji nweta nnabata, yana ogo ya dị mma ma kwụsie ike, nke chọrọ h ...
Nhọrọ ziri ezi na nke ezi uche dị na ya na ojiji nke mpaghara 5 maka akwa mkpuchi na-eguzogide ọgwụ dị elu
Igwe na-eguzogide ọgwụ dị elu Dị ka aha ahụ na-egosi, ọ bụ nchekwa nchekwa nchekwa dị elu dị elu dị elu ejiri gburugburu gburugburu. Oke elu okpomọkụ agwakọta chemical eriri ise mkpịsị aka uwe nkwụ na ndeksi mkpịsị aka eyi na-eguzogide akpụkpọ anụ imewe ...
10 nchebe nchebe nkịtị na nkọwa na arụmọrụ ha
Aka bụ akụkụ dị oke mkpa nke ahụ anyị, na ọrụ na ndụ enweghị ike ịhapụ ya. Site na mgbe a mụrụ anyị, rue na njedebe nke ndụ, aka na-agagharị mgbe niile. Ọ bụ ihe nwute na anyị na-elegharakarị mkpa ya na nchedo aka anyị anya, nke mere na m ...
Igwe aka na-echebe kemịkalụ Ọ bụ akụkụ dị oke mkpa nke mmepụta kemịkal ma chebe ahụike nke ndị ọrụ. Ọtụtụ ndị mmadụ maara ogwe aka nchekwa kemịkal, mana ha amachaghị banyere ya. Ndị a bụ ụdị ihe nchebe kemịkalụ kemịkalụ asatọ, yana brie ...